कोरोना भाइरस- २४ घण्टामा ६ हजार ८३ जनकाे मृत्यु, ८० हजार २१८ नयाँ संक्रमित थपिए — Sanchar Kendra
१कोरोना अस्पतालको आईसीयूबाटै सुनका गहना गायब, ररहस्य थाहा पाएर डाक्टर समेत हैरान
२अमेरिकी गुप्तर प्रमुखले चीनलाई लगाए यस्तो गम्भीर आरोप
३खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हट्यो गाँजा, नेपालको मतदान प्रस्तावको पक्ष कि विपक्षमा ?
४सीमा विवादको कुरा उठाएपछि चीनले नेपाली कांग्रेसलाई लेख्यो यस्तो पत्र, केछ पत्रमा ? हेर्नुहोस पूर्णपाठसहित
५नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, ओली आउछन कि आउदैनन् ?
६कोरोना महामारीकाबीच मोदीले गरिदिए यस्तो ठुलो घोषणा, भारतभर खुसियाली, विश्व नै दंग
७एकाबिहानै दुखद खबर- हुम्लामा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु, ७ घाइते
८सकियो नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक, ओली सरकारलाई काउन्टर दिन भए यस्ता निर्णय
९कोरोनाबाट संक्रमणबाट थप १६ जनाको मृत्यु
१०पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएका बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहका विद्यार्थीको गोप्य भेला, के भयो निर्णय ?
११नबिल बैंक र वान टु वाच बीच लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न सहकार्य
१२२४ घण्टामा थपिए १२७२ कोरोना संक्रमित, कहाँ कति ?
१कोरोना संक्रमणबाट थप २९ जनाको मृत्यु
२एकाविहानै देशै हल्लिने गरी शक्तिशाली भूकम्प गयो, यस्ताे छ मानवीय क्षतिकाे विवरण
३प्रहरीलाई छक्याएर जेलबाट भागे नेकपाका कार्यकर्ता, को हुन् उनि ?
४अमेरिकी राष्ट्रपतिमा बाइडन निर्वाचित, ट्रम्पलाई कति मतले पराजित गरे ?
५राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि बाइडेनले पहिलोपटक गरे यस्तो आह्वान, ट्रम्पलाई यतिसम्म भनेपछि सबै दंग
६पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
७नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धनबारे भयो यस्तो नयाँ खुलासा, नेपालीहरू चकित
८चिनियाँ रक्षामन्त्री र नेपालबीच यस्तो सहमति भएको खुलासा, नेपाली सेनाले विज्ञप्ति निकाल्दै दियो जानकारी
९डिसेम्बर दोस्रो साताबाट कोभिड-१९ विरूद्धको खोप दिने तयारी, क-कसले पाउछन ?
१०ओलीलाई कसले दियो सुरक्षा थ्रेट ? गृहको यस्तो रिर्पोटिङ गरेपछि चाले कडा कदम
११नेकपाको पुनर्गठन दिवस लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा
१२नेपालसंगको सम्बन्धबारे भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले गरे यस्तो खुलासा, काठमाडाैंदेखि नयाँदिल्लीसम्म खैलाबैला
कोरोना भाइरस- २४ घण्टामा ६ हजार ८३ जनकाे मृत्यु, ८० हजार २१८ नयाँ संक्रमित थपिए
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १७ लाख ७९ हजार ९९ पुगेको छ । बितेको २४ घण्टाको अवधिमा मात्रै ८० हजार २१८ नयाँ संक्रमित थपिएको छन् । यो हिजोको भन्दा बढी हो ।
त्यस्तै एकैदिन ६ हजार ८३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरुसँग अब कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ८ हजार ७७० पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ४ लाख २ हजार ७०९ जना उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन् । अहिले निको भएर फर्कनेहरुपनि संक्रमित हुने क्रम बढ्न थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
अहिले १२ लाख ६७ हजार ६२० जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । जसमध्ये ५० हजार ५८४ जनाको अवस्था गम्भीर छ । चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोनाको संक्रमण अमेरिकामा बढी फैलिएको छ । अमेरिकामा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमित छन् भने ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि अमेरिकैमा बढी पुगेको छ ।
अमेरिकामा ५ लाख ३२ हजार ८७९ जनामा संक्रमण भएको छ । २४ घण्टामा मत्रै ३० हजार ३ नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । कोरोना संक्रमितमध्ये २० हजार ५७७ जनाको मृत्यु भएको छ । एकै दिन अमेरिकामा १ हजार ८३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
इटालीमा एकैदिन ६१९ जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या हजार ४६८ पुगेको हो । इटालीमा एकैदिन ६१९ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ५२ हजार २७१ पुगेको छ ।
इटालीमा संक्रमितमध्ये ३२ हजार ५३४ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ३ हजार ३८१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । १ लाख २६९ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बेलायतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९१७ जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ८७५ पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या ७८ हजार ९९१ पुगको छ । जसमा एकै दिन ५ हजार २३३ जना संक्रमित भएको जनाइएको छ । बेलायतमा संक्रमितमध्ये ३४४ जना उपचारपछि निको भएका छन् । १ हजार ५५९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । संक्रमितमध्ये ६८ हजार ७७२ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
स्पेनमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५२५ जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजार ६०६ पुगेको छ । स्पेनमा एकैदिन ४ हजार ७५० जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख ६३ हजार २७ पुगेको छ । स्पेनमा संक्रमितमध्ये ५९ हजार १०९ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
७ हजार ३७१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने ८७ हजार ३१२ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३९ जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या २८८ पुगेको छ । भारतमा एकैदिन ८ सय ४६ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या ८ हजार ४४६ पुगेको छ । भारतमा संक्रमितमध्ये ९६९ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ७ हजार १८९ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
कोरोना अस्पतालको आईसीयूबाटै सुनका गहना गायब, ररहस्य थाहा पाएर डाक्टर समेत हैरान
अमेरिकी गुप्तर प्रमुखले चीनलाई लगाए यस्तो गम्भीर आरोप
खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हट्यो गाँजा, नेपालको मतदान प्रस्तावको पक्ष कि विपक्षमा ?
एकाबिहानै दुखद खबर- हुम्लामा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु, ७ घाइते
२४ घण्टामा थपिए १२७२ कोरोना संक्रमित, कहाँ कति ?
मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक साढे तीन घण्टा बन्द गरिने
एकैसाथ किन कोरोना खोप लगाउँदैछन तीन अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति, यस्तो छ कारण
उदयपुरमा शक्तिशाली ब’म वि’स्फोट, ४ जना घाइते, थप विवरणसहित
सरकारी नेकपाभित्रको अन्तरविरोध बारे एक टिप्पणी